ဆယျတနျးကြောငျးသူ – MM Republic
နကေ ဆယျတနျးကြောငျးသူလေးပါ(အဆောငျနကြေောငျးအိပျကြောငျးစားပါ ယောကျြားလေးတှနေဲ့သပျသပျဆီဆိုတော့ မကမ်ဘာထဲမှာပဲနခေဲ့ရသူပါ။) ဆယျတနျးကြောငျးသူဆိုတော့ ဆယျတနျးဖွရေတာပေါ့လေ(သိပွီးသားမလား) နဆေယျတနျးဖွေ တော့ နနေဲ့တဈခုံတညျးထိုငျရတယျ့ကောငျလေးက နတေို့ ကြောငျးက နာမညျကြျောလေးလေ(ဆိုးလို့တော့ ဟုတျဘူး ပှဲအားလုံးမှာ သူက ခေါငျးဆောငျပွီး လိုကျလုပျပေးလို့)(သူကလဲ အဆောငျကြောငျးသားပဲလေ) နာမညျသာကွီးတာပါ စာမေးပှဲလာဖွေ တော့ နာရီမပါဘူး (နာမညျကွီးထမငျးငတျတဈကယျရှိမှနျးသိသှားတယျ) မွနျမာစာနကွေီ့း နာရီတဈလုံး နှဈယောကျကွညျ့လိုကျရတယျ။ အဲ့ကိုယျတျောခြောက နောကျတဈရကျ လညျးကြ ရော ကြေးဇူးတငျကွောငျးဘာကွောငျးလာပွောတယျ။
နကေို့ ရောခငျြတယျပဲ ထငျတာပေါ့ သူက နှရောသီ အကွောငျး စာစီစာကုံး ဘယျနှမကျြနှာ ရေးလဲတယျ့ နေ က ၆မကျြနှာလို့ပွနျဖွေ လိုကျတယျ နောကျမှနေ လနျ့သှားတယျ ဘယျနှယျ့လုပျသိနရေလဲလို့ ဒီလိုနှယျ့ နကေို့ နရေဲ့အကွောငျးလေးတှကေို တဈဝကျပွော တဈဝကျမေးလုပျလာခဲ့တယျ့ ကောငျလေးကို နလေညျးခငျမိလာတာပေါ့ (စာမေးပှဲခွောကျရကျအတှငျးနျော) အဲနောကျဆုံးနလေ့ညျး ရောကျရော သူက နေ့ ကို ခဈြပါတယျတယျ့ သူ့မှာ ကြောငျးကိစ်စနဲ့ပဲ ရှုပျနလေို့ ရညျးစားမထားခဲ့ပါဘူး တယျ့ (ကြောငျးသားတှခေညျြးရှိတာဆိုတော့လဲ ယုံမိတာပေါ့ရှငျ) နကေလညျး ရှကျပွုံးလေးပွုံးပွီး စာမေးပှဲခနျးထဲက ပွေးထှကျလာမိပါတယျ သူကတော့ နကေိုကွညျ့ရငျး ကနျြနမှောပေါ့ နတေို့တှေ စာမေးပှဲခနျးကထှကျပွီး နတေို့ကြောငျးရှမှေ့ာ အားလုံးပွနျစုရတယျလေ (ဆရာဆရာမတှကေိုကနျတော့နှုတျဆကျဖို့ပါ) နတေို့ တှေ ဆရာတှကေိုကနျတော့ကွ ရတှေပေကျကွ ဝမျးနညျးလို့ငိုကွနဲ့ပေါ့ရှငျ နကေ့ောငျလေးက အဲ့အခြိနျမှာ ကြောငျးသူတှနေားမရောကျရောကျအောငျလာပွီး နကေို့ ကြောငျးစာသငျခနျး အလှတျ တဈခုစီ လှမျးခြိနျးပါတော့တယျ (ရတှေစေိုဆူညံနတေော့လာဖို့မခကျပါဘူး) နသေူ့ငယျခငျြးတှကေတော့ ကောငျမစှံလှခညျြလားပေါ့။
နလေညျး မသိမသာ လှဈထှကျခဲ့ပါတော့တယျ လူတှအေားလုံးက အရှကှေ့ငျးပွငျက နှုတျဆကျပှဲကိုပဲ ဂရုစိုကျနတေော့ စာသငျခနျးတှဟောတိတျတဆိတျအထီးကနျြငွိမျသကျခွငျး တှနေဲ့ပဲ ပွညျ့နတေယျလေ သူက ကြောငျးအဖွူအစိမျး လေးနဲ့ ရတှေစေိုစို နဲ့အခနျးဝမှာရပျနတေယျ နကေတော့ ကြောငျးဖွူ အကငြ်္ီ အပျေါက နှရေဲ့သင်ျကတေ ပိတောကျရောငျ အနှေးထညျလေးနဲ့ ကြောငျးစိမျးထဘီ လေးနဲ့ပေါ့ရှငိ နရေဲ့အလှကတော့ ရစေိုနလေို့ လုံးဝပျေါလှငျနမေယျထငျတာပဲရှငျ့ နကေလုံးကွီးပေါကျလှအငယျလေးနျော(ဘောလုံးသမရှငျ့ )(ငါကှကွုံကွှား ) နတေို့ စာသငျခနျးထဲက ခုံတဈခု မှာ ဝငျထိုငျမိလိုကျကွတယျ နတေို့နှဈယောကျ အနီးစပျဆုံးတို့ထိုငျလိုကျကွတယျ နတေို့တှေ စာမေးပှဲခနျးတုံးက စညျးကို အခုကြျောနိုငျလို့ နတေဈကယျရငျခုနျမိတယျ နရေငျတှခေုနျနတေယျ ယောကျြားဆိုတာမမွငျရတာ ကွာသှားလို့ ထငျတာပဲ နရေဲ့ကြောငျးသားလေးနာမညျက မောငျလို့ပဲထားလိုကျပါရှငျ(ပွောပွလိုကျရငျသူလေးရှကျသှားမယျ) “နငေါနငျ့ကိုတဈကယျခဈြမိသှားပါ””နရေယျဒီခွောကျရကျဟာ ငါ့ရဲ့ဘဝကို အနာဂတျရေးရာကော နှလုံးသားရေးရာကိုပါ ပွောငျးလဲသှားစမေယျလို့ တဈခါမှမထငျခဲ့ဘူးပါဘူး ဒါပမေယျ့ တဈကယျဖွဈလာတယျလနေေ””နကေိုယျ့ကို ဘယျလိုအဖွမြေိုးပေးနိုငျမလဲနေ” မောငျ့ရယျ့ စကားလေးတှကေိုသာယာမိသှားတယျ။
မောငျ့လကျကလေးတှကေ နရေဲ့ဆံစ လေးတှကေို အသာအယာပှတျသကျပေးနတေယျ နေ ရှကျရှကျနဲ့ပဲ ခေါငျးငွိမျ့လိုကျပါတော့တယျ ကွညျနူးတယျ့အပွုံးတှနေဲ့နတေို့နှဈယောကျဖကျထားမိကွတယျ မောငျ့နဲ့နေ နှုတျခမျးခငျြးထိ ပွီး လြှာခငျြး ကစားမိကွတယျ နအေ့ဖုတျကလေးကတော့ အခနျးထဲစရောကျကတညျးက အရညျရှဲနတောပေါ့ နတေို့နှဈယောကျ အခငျြးခငျြး တငျးတငျးကပျြကပျြဖကျထာားမိတယျလေ အသဈစကျစကျ ရညျးစားလေးတှေ ဆိုတာကွောငျ့ ရငျခုနျတာ က အထှတျအထိပျပေါ့ နရေဲ့ လညျပငျးနားတဈဝိုကျ ကို မောငျက အားရပါးရ နမျးပေးတော့ နလေေ ဘယျလိုပွောရမလဲ ပေါ့ တဈအားပဲစိတျထလာမိတယျ နေ့ ပငျတီလေးက အရညျရှဲနပွေီလေ နို့သီးလေးတှကေလဲမာနပွေီပေါ့ မောငျ့လကျတှကေ နအေ့နှေးထညျကို ခြှတျဖို့လုပျတယျ နလေညျးဘာလို့မှနျးမသိဘူး သူ ခြှတျရလှယျအောငျကူလိုကျတယျ မောငျကတော့ နအေ့ကငြ်္ီ ကော ဘျောလီကော အောကျ လကျထိုးပွီး နနေို့နှဈဖကျကို လကျနဲ့ဆော့နတောလေ “နို့စို့ခငျြတယျနရေယျ”မောငျ့အသံကလေးက သူဆော့တာခံနတေယျ့နကေို့နှိုးလိုကျသလိုပဲ နလေညျးဘျောလီလနျပွီး နို့စို့ရလှယျအောငျလုပျပေးလိုကျတယျ နတေို့နှဈယောကျလုံးက စာရေးခုံပျေါပကျလကျကွီးပေါ့ မောငျ့ရဲ့ ခေါငျးက တဈဖွညျးဖွညျး နဲ့ အောကျကို ဆငျးသှားတယျ နရေဲ့ပွနေပွေီဖွဈတယျ့ထဘီကို ပုံကသြှားအောငျ ခြှတျလိုကျတယျ နကေ အပျေါမှာလညျး နို့လနျ အောကျမှာလညျး အဖုတျပဲဖုံးထားတာကနျြတော့တယျလေ။
မောငျက နရေဲ့နို့ကနေ စနမျးလာလိုကျတာ ဗိုကျပွီးတော့ခကျြ ပွီးတော့ နရေဲ့အရညျတှစေိုနတေယျ့ အဖုတျလေးလေ မောငျက နရေဲ့ပငျတီ လေးကို ပါးစပျနဲ့ကိုကျခြှတျလိုကျတယျ နရေဲ့အဖုတျ ကလေးက အလြှကျ ခံဖို့အသငျ့ပေါ့ နလေေ မောငျ့ လြှာကို မြှျောနမေိတယျ ဘာကွောငျ့မှနျးတော့မသိဘူး မောငျက သူ့လြှာနဲ့ နေ့ အဖုတျကို ပထမဆုံးအပျေါအောကျလြှကျပေးတယျ တဈခကျြတဈခကျြကွရငျ နအေ့စိလေးကို ပါလြှာနဲ့တို့ပွီးကစားပေးသေးတယျ မောငျ့ရဲ့လြှာက တဈဖွညျးဖွညျး နဲ့နေ့ အဖုတျထဲထိ ဝငျ လာတယျ အဖုတျနံရံလေးတှလေညျး အားရပါးရလြှကျပေးတယျ “အ အ အ” နေ ဘယျလိုပွောရမှနျးတောငျမသိဘူး ခံစားရတယျ့အရသာကလေ ဘယျလိုပွောရမလဲပေါ့ နေ ခုံကို လကျနဲ့ကိုငျထားပွီး နအေ့ဖုတျလေးကို မရှကျတမျးကော့ထားမိတယျ မောငျကတော့နကေို့ သခြောခါးက ဖကျပွီး လြှကျပေးနပေါတော့တယျ မောငျက မကျြနှာနဲ့ အဖုတျနဲ့ ခဏ ခှာလိုကျပါတယျ နလေညျး မကျြနှာကကျြကို မော့နရောက အောကျကို တဈခကျြ ငုံ့ကွညျ့မိပါတယျ မောငျက ဒီတဈခါကွတော့ နေ့ အဖုတျထဲ လြှာ ထညျ့ပွီး လိုးပါတော့တယျ နအေ့မွေးပါးလေးကိုတောငျတဈခကျြခကျြ လာထောကျပါတယျ (နကေအပြိုစဈစဈရှငျ့ အဲ့အခြိနျကပွောပါတယျ) “မောငျ နအေ့မွေးပါးကိုမဖောကျပါနဲ့နျော နေ့ အိမျက သိရငျ သတျလိုကျမယျ” “မောငျနားလညျပါတယျနရေယျ ဒါပမေယျ့ မောငျ့လီးတော့ စုပျပေးနျော” “ဟုတျပါပွီမောငျရယျ” ဆိုပွီး ကြှနျမလညျး ခုံပျေါကဆငျးပွီး ဒူးထောကျလိုကျတယျ။
မောငျ့လီး နဲ့ကြှနျမမကျြနှာ တနျးတနျး လောကျ အနအေထားပါ့ မောငျက သူ့ပုဆိုးကိုခြှတျခလြိုကျတယျ ကွမျးပွငျမှာ ပုံသှားတာပေါ့ မောငျ့အတှငျးခံလေးကိုဆှဲခြှတျရငျး မောငျ့လီးကို ကွညျ့နမေိတယျ အရှညျကွီးပဲရှငျ့ ၆လကျမ ရလကျမ လောကျရှိမယျ ထောငျမတျပွီးထိပျမှာအရညျတှရှေဲနတေယျ နလေညျး နတေံ့တှေးနဲ့ သူ့အရညျရယျ ပေါငျးပွီး လီးတဈခြောငျးလုံးပှတျပေးရငျး အရငျ ဆုံး မောငျ့ဟာလေးကို ဂှငျးတိုကျပေးနမေိတယျ မောငျက တော့ တဈအားကို ကနြေပျနတေယျ့ပုံပါပဲ နစေစခငျြးမောငျ့ဒဈကိုငုံလိုကျတယျ ပွီးမှတဈဖွညျးဖွညျး အရငျးထိ စုပျခသြှားတယျ နလေညျးပါးစပျနဲ့အထကျတကျလိုကျအောကျဆငျးလိုကျနဲ့ အားရပါးရစုပျပေးပါတယျ မောငျ့အခြောငျးကလေ ပူပူနှေးနှေးလေးရှငျ့ (စုပျလို့ကောငျးတယျ ပွောရငျလှနျမလား မသိဘူး) ” အ ….အ ….. နေ မောငျ ထှကျတော့မယျ” နလေညျး မောငျ့ လီးကွီးပါးစပျက ခြှတျရငျး “မောငျကလညျး နမေ့ကျြနှာတှေ ပအေောငျ အပွငျ မှာ ထုတျမလို့လား ” “နေ ရှံ မှာစိုးလို့ပါ မောငျက ပွဿနာမရှိဘူး” “မောငျ ရေ အသငျ့ပွငျထားပတေော့” နလေညျး မောငျ့လီးကွီးတဈခြောငျးလုံးကို ငုံထား လိုကျ ပွီး အားရပါးရ လြှာနဲ့ကစားပါတော့တယျ မောငျ့ ရဲ့ သုတျတှဟောလညျး အား ကောငျးကောငျးနဲ့အပွငျထှကျလာလိုကျတာ နအေ့ာ့ခေါငျ တဈခု လုံး ပူနှေး သှားတာပါပဲရှငျ နလေညျးလေ ငနျကြိကြိ သုတျကလေးတှကေို မောငျ့ခဈြတယျ့စိတျကွောငျ့ပဲ မြိုခမြိသှားပါတယျ။
နလေညျး ပါးစပျကိုအသာအယာ သုတျရငျး “မောငျနမေပွီးသေးဘူးနျော” “မောငျကလညျးနကေို့ဒီအတိုငျပဈမထားပါဘူး နရေယျ့ လာခုံနှဈလုံးကပျလိုကျရအောငျ” ပွောပွောဆိုဆိုနဲ့ပဲ စာရေးခုံနှဈလုံးကပျ လိုကျတာပေါ့ နတေို့နှဈယောကျယှဉျအိပျလို့ ရအောငျတော့ကယျြတာပေါ့ “မောငျ နအေ့မွေးပါးပေါကျရငျ နအေိ့မျကသတျမှာနျော” “နကေလညျး မောငျနကေို့ မလုပျပါဘူး နပွေီးသှားအောငျ မောငျ စောငျးတိုကျပေးမလို့ နေ ခုံပျေါအိပျလိုကျလေ နမေောငျ့ကို တော့ တဈမြိုမထငျနဲ့နျော နစေောငျးတိုကျဘူးလား” “အျော မောငျကလညျး နေ ဒီအရှယျကွီးရောကျမှတော့ မလုပျတတျဘဲနပေါ့မလား အဆောငျမှာ out pass ထှကျရငျလညျး အငျတာနကျဆိုငျပွေး အဲ့ကားတှကွေညျ့ပွီး တိုကျရတာ က အမော တဈခါတဈလေ ဆို အဆောငျမှာတောငျမဟုတျဘူး စိတျတဈအားပါလာလို့ အငျတာနကျဆိုငျမှာတငျ တိုကျပွီးပွီးသှားတယျ ဒါကွောငျ့မလို့လဲ မောငျ့ကို ပွုစုနိုငျတာလေ မဟုတျရငျအဲ့လောကျကွီးကြှမျးပါ့မလားမောငျရယျ့” နလေညျးပွောပွောဆိုဆိုနဲ့ ခုံပျေါတကျအိပျလိုကျပါ တော့တယျ။
မောငျကနအေ့ဖုတျလေးကိုလကျနဲ့အသာအယာပှတျပေးတယျ အထကျနဲ့အောကျမှနျမှနျလေးပေါ့ တဈခကျြခကျြကြ တော့ နအေ့ဖုတျထဲလကျကလေး နှုတျပွီးပှတျပေးတယျ နအေ့စိလေးကိုလညျး မောငျကကစားပေးတယျလေ လကျကလေးနဲ့ ပေါ့ မောငျ ရဲ့ လကျကွောငျ့ပဲ နေ ထူးကဲတယျ့အရသာတှေ ခံစားရတာ ဘယျလိုပွောရမှနျးတောငျမသိပါဘူးရှငျ မောငျရဲ့ လကျရဲ့ ကစားတာကလေ မှနျ မှနျ လေးကနေ တဖွညျးဖွညျးနဲ့မွနျလာပါတယျ ပွီးတော့လေ “မောငျ နကေို့ နောကျတဈခေါကျ ထပျလကျြပေးမယျ နျော ” ဆိုပွီး မောငျဟာ နေ့ ကို ဒူးထောငျခိုငျးပွီး ပေါငျကွားနှဈဖကျကွားခေါငျးစိုကျပွီး အားရပါးရရကျပါတော့တယျ မောငျက နေ့ အဖုတျလေးကို အထကျ အောကျ လြှာ အပွား လိုကျ ရကျလိုကျ အဖုတျ နံရံ လေးတှကေို လြှာ နဲ့ ထိုး လိုးလိုကျ အစိ လေးကို လြှာ နဲ့ ထိ လိုကျ နဲ့ ကစားပေး တယျလေ နလေေ ခုံ ကို ကိုငျ ထားပွီး တော့ မရှကျ တမျး အဖုတျ ကို ကော့ထား ပေးမိတယျ “အား အ အ လကျြပါ မောငျ ရယျ့ အား ရပါးရ လကျြ လိုကျပါ မောငျရယျ့ အစိ လေးကို ပါထိ အောငျ လကျြပါ မောငျရယျ့ နေ လေ မအောငျ့နိုငျတော့ ဘူး သိလား” နလေေ တဈ ကိုယျ လုံး ကို ထူးထူး ဆနျးဆနျး အရသာခံစားရပွီး ပါးစပျက အျောရငျးညညျးရငျး နဲ့ပဲ ပွီးသှားပါတယျ မောငျကတော့ နေ့ အဖုတျရညျတှကေို နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျ အားရပါးရ သောကျသုံး လိုကျပါတော့တယျ “မောငျ နေ မောငျ့ကို သိပျခဈြတာပဲ မောငျ” နလေညျး ခုံ ပျေါက ထ ကွမျးပွငျပျေါ ပုံ ကြ နတေယျ့ ထဘီကို ပွနျဝတျ ဖို့ အလုပျမှာ “နေ နေ့ ပငျတီလေးကို မောငျ အမှတျတရ သိမျးထားပါရစနေျော”။
“လို ခငျြ ရငျ မောငျ့ဘောငျးဘီပွနျပေးခဲ့လေ” “ကတိနျော ကတိ” ပွောပွောဆိုဆို ပဲ မောငျ ကနပေ့ငျတီလေးကို နမျးရငျး တယုတယ သိမျးသှားပါတယျ နကေတော့ လူ မွငျမှာ ကွောကျတာနဲ့ မောငျ့အတှငျးခံဘောငျးဘီကို ဝတျလိုကျပါတယျ မောငျနဲ့နတေို့တဈယောကျနဲ့တဈယောကျပူးပူးကပျကပျဖကျပွီး ပါးစပျခွငျးထိ ပွီး လြှာခွငျးကစားခဲ့ကွတယျ “နေ မောငျ့ဆီ ဖုနျးဆကျအုနျးနျော တက်ကသိုလျလညျးတူတူတကျကွမယျနျော” “ဟုတျပါပွီမောငျရယျ့ ပွနျကွရအောငျ အပွငျမှာ တဈဆောငျခွငျးစီ ကြောငျးကားပျေါတကျပွီးထှကျနပွေီ” နမေောငျ့နှုတျခမျးလေးတှကေို စုပျနမျးပွီး နှုတျဆကျအနမျးပေးခဲ့လိုကျတယျ နကေနတေ့ောငျပျေါမွို့လေးကိုပွနျ မောငျက အညာကိုပွနျတာပေါ့ . . . . . ဖုနျးမွညျလာ ၍ ကွညျ့လိုကျမိသညျ မမွငျဖူးသောဖုနျးနံပါတျတဈခုပငျဖွဈသညျ …… ပွီးပါပွီ။
နေက ဆယ်တန်းကျောင်းသူလေးပါ(အဆောင်နေကျောင်းအိပ်ကျောင်းစားပါ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့သပ်သပ်ဆီဆိုတော့ မကမ္ဘာထဲမှာပဲနေခဲ့ရသူပါ။) ဆယ်တန်းကျောင်းသူဆိုတော့ ဆယ်တန်းဖြေရတာပေါ့လေ(သိပြီးသားမလား) နေဆယ်တန်းဖြေ တော့ နေနဲ့တစ်ခုံတည်းထိုင်ရတယ့်ကောင်လေးက နေတို့ ကျောင်းက နာမည်ကျော်လေးလေ(ဆိုးလို့တော့ ဟုတ်ဘူး ပွဲအားလုံးမှာ သူက ခေါင်းဆောင်ပြီး လိုက်လုပ်ပေးလို့)(သူကလဲ အဆောင်ကျောင်းသားပဲလေ) နာမည်သာကြီးတာပါ စာမေးပွဲလာဖြေ တော့ နာရီမပါဘူး (နာမည်ကြီးထမင်းငတ်တစ်ကယ်ရှိမှန်းသိသွားတယ်) မြန်မာစာနေ့ကြီး နာရီတစ်လုံး နှစ်ယောက်ကြည့်လိုက်ရတယ်။ အဲ့ကိုယ်တော်ချောက နောက်တစ်ရက် လည်းကျ ရော ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဘာကြောင်းလာပြောတယ်။
နေ့ကို ရောချင်တယ်ပဲ ထင်တာပေါ့ သူက နွေရာသီ အကြောင်း စာစီစာကုံး ဘယ်နှမျက်နှာ ရေးလဲတယ့် နေ က ၆မျက်နှာလို့ပြန်ဖြေ လိုက်တယ် နောက်မှနေ လန့်သွားတယ် ဘယ်နှယ့်လုပ်သိနေရလဲလို့ ဒီလိုနှယ့် နေ့ကို နေ့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကို တစ်ဝက်ပြော တစ်ဝက်မေးလုပ်လာခဲ့တယ့် ကောင်လေးကို နေလည်းခင်မိလာတာပေါ့ (စာမေးပွဲခြောက်ရက်အတွင်းနော်) အဲနောက်ဆုံးနေ့လည်း ရောက်ရော သူက နေ့ ကို ချစ်ပါတယ်တယ့် သူ့မှာ ကျောင်းကိစ္စနဲ့ပဲ ရွုပ်နေလို့ ရည်းစားမထားခဲ့ပါဘူး တယ့် (ကျောင်းသားတွေချည်းရှိတာဆိုတော့လဲ ယုံမိတာပေါ့ရှင်) နေကလည်း ရှက်ပြုံးလေးပြုံးပြီး စာမေးပွဲခန်းထဲက ပြေးထွက်လာမိပါတယ် သူကတော့ နေကိုကြည့်ရင်း ကျန်နေမှာပေါ့ နေတို့တွေ စာမေးပွဲခန်းကထွက်ပြီး နေတို့ကျောင်းရှေ့မှာ အားလုံးပြန်စုရတယ်လေ (ဆရာဆရာမတွေကိုကန်တော့နွုတ်ဆက်ဖို့ပါ) နေတို့ တွေ ဆရာတွေကိုကန်တော့ကြ ရေတွေပက်ကြ ဝမ်းနည်းလို့ငိုကြနဲ့ပေါ့ရှင် နေ့ကောင်လေးက အဲ့အချိန်မှာ ကျောင်းသူတွေနားမရောက်ရောက်အောင်လာပြီး နေ့ကို ကျောင်းစာသင်ခန်း အလွတ် တစ်ခုစီ လှမ်းချိန်းပါတော့တယ် (ရေတွေစိုဆူညံနေတော့လာဖို့မခက်ပါဘူး) နေ့သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ကောင်မစွံလှချည်လားပေါ့။
နေလည်း မသိမသာ လှစ်ထွက်ခဲ့ပါတော့တယ် လူတွေအားလုံးက အရှေ့ကွင်းပြင်က နွုတ်ဆက်ပွဲကိုပဲ ဂရုစိုက်နေတော့ စာသင်ခန်းတွေဟာတိတ်တဆိတ်အထီးကျန်ငြိမ်သက်ခြင်း တွေနဲ့ပဲ ပြည့်နေတယ်လေ သူက ကျောင်းအဖြူအစိမ်း လေးနဲ့ ရေတွေစိုစို နဲ့အခန်းဝမှာရပ်နေတယ် နေကတော့ ကျောင်းဖြူ အင်္ကျီ အပေါ်က နွေရဲ့သင်္ကေတ ပိတောက်ရောင် အနွေးထည်လေးနဲ့ ကျောင်းစိမ်းထဘီ လေးနဲ့ပေါ့ရှငိ နေရဲ့အလှကတော့ ရေစိုနေလို့ လုံးဝပေါ်လွင်နေမယ်ထင်တာပဲရှင့် နေကလုံးကြီးပေါက်လှအငယ်လေးနော်(ဘောလုံးသမရှင့် )(ငါကွကြုံကြွား ) နေတို့ စာသင်ခန်းထဲက ခုံတစ်ခု မှာ ဝင်ထိုင်မိလိုက်ကြတယ် နေတို့နှစ်ယောက် အနီးစပ်ဆုံးတို့ထိုင်လိုက်ကြတယ် နေတို့တွေ စာမေးပွဲခန်းတုံးက စည်းကို အခုကျော်နိုင်လို့ နေတစ်ကယ်ရင်ခုန်မိတယ် နေရင်တွေခုန်နေတယ် ယောက်ျားဆိုတာမမြင်ရတာ ကြာသွားလို့ ထင်တာပဲ နေရဲ့ကျောင်းသားလေးနာမည်က မောင်လို့ပဲထားလိုက်ပါရှင်(ပြောပြလိုက်ရင်သူလေးရှက်သွားမယ်) “နေငါနင့်ကိုတစ်ကယ်ချစ်မိသွားပါ””နေရယ်ဒီခြောက်ရက်ဟာ ငါ့ရဲ့ဘဝကို အနာဂတ်ရေးရာကော နှလုံးသားရေးရာကိုပါ ပြောင်းလဲသွားစေမယ်လို့ တစ်ခါမှမထင်ခဲ့ဘူးပါဘူး ဒါပေမယ့် တစ်ကယ်ဖြစ်လာတယ်လေနေ””နေကိုယ့်ကို ဘယ်လိုအဖြေမျိုးပေးနိုင်မလဲနေ” မောင့်ရယ့် စကားလေးတွေကိုသာယာမိသွားတယ်။
မောင့်လက်ကလေးတွေက နေ့ရဲ့ဆံစ လေးတွေကို အသာအယာပွတ်သက်ပေးနေတယ် နေ ရှက်ရှက်နဲ့ပဲ ခေါင်းငြိမ့်လိုက်ပါတော့တယ် ကြည်နူးတယ့်အပြုံးတွေနဲ့နေတို့နှစ်ယောက်ဖက်ထားမိကြတယ် မောင့်နဲ့နေ နွုတ်ခမ်းချင်းထိ ပြီး လျှာချင်း ကစားမိကြတယ် နေ့အဖုတ်ကလေးကတော့ အခန်းထဲစရောက်ကတည်းက အရည်ရွဲနေတာပေါ့ နေတို့နှစ်ယောက် အချင်းချင်း တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖက်ထာားမိတယ်လေ အသစ်စက်စက် ရည်းစားလေးတွေ ဆိုတာကြောင့် ရင်ခုန်တာ က အထွတ်အထိပ်ပေါ့ နေရဲ့ လည်ပင်းနားတစ်ဝိုက် ကို မောင်က အားရပါးရ နမ်းပေးတော့ နေလေ ဘယ်လိုပြောရမလဲ ပေါ့ တစ်အားပဲစိတ်ထလာမိတယ် နေ့ ပင်တီလေးက အရည်ရွဲနေပြီလေ နို့သီးလေးတွေကလဲမာနေပြီပေါ့ မောင့်လက်တွေက နေ့အနွေးထည်ကို ချွတ်ဖို့လုပ်တယ် နေလည်းဘာလို့မှန်းမသိဘူး သူ ချွတ်ရလွယ်အောင်ကူလိုက်တယ် မောင်ကတော့ နေ့အင်္ကျီ ကော ဘော်လီကော အောက် လက်ထိုးပြီး နေ့နို့နှစ်ဖက်ကို လက်နဲ့ဆော့နေတာလေ “နို့စို့ချင်တယ်နေရယ်”မောင့်အသံကလေးက သူဆော့တာခံနေတယ့်နေ့ကိုနှိုးလိုက်သလိုပဲ နေလည်းဘော်လီလန်ပြီး နို့စို့ရလွယ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ် နေတို့နှစ်ယောက်လုံးက စာရေးခုံပေါ်ပက်လက်ကြီးပေါ့ မောင့်ရဲ့ ခေါင်းက တစ်ဖြည်းဖြည်း နဲ့ အောက်ကို ဆင်းသွားတယ် နေ့ရဲ့ပြေနေပြီဖြစ်တယ့်ထဘီကို ပုံကျသွားအောင် ချွတ်လိုက်တယ် နေက အပေါ်မှာလည်း နို့လန် အောက်မှာလည်း အဖုတ်ပဲဖုံးထားတာကျန်တော့တယ်လေ။
မောင်က နေ့ရဲ့နို့ကနေ စနမ်းလာလိုက်တာ ဗိုက်ပြီးတော့ချက် ပြီးတော့ နေ့ရဲ့အရည်တွေစိုနေတယ့် အဖုတ်လေးလေ မောင်က နေရဲ့ပင်တီ လေးကို ပါးစပ်နဲ့ကိုက်ချွတ်လိုက်တယ် နေ့ရဲ့အဖုတ် ကလေးက အလျှက် ခံဖို့အသင့်ပေါ့ နေလေ မောင့် လျှာကို မျှော်နေမိတယ် ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိဘူး မောင်က သူ့လျှာနဲ့ နေ့ အဖုတ်ကို ပထမဆုံးအပေါ်အောက်လျှက်ပေးတယ် တစ်ချက်တစ်ချက်ကြရင် နေ့အစိလေးကို ပါလျှာနဲ့တို့ပြီးကစားပေးသေးတယ် မောင့်ရဲ့လျှာက တစ်ဖြည်းဖြည်း နဲ့နေ့ အဖုတ်ထဲထိ ဝင် လာတယ် အဖုတ်နံရံလေးတွေလည်း အားရပါးရလျှက်ပေးတယ် “အ အ အ” နေ ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး ခံစားရတယ့်အရသာကလေ ဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့ နေ ခုံကို လက်နဲ့ကိုင်ထားပြီး နေ့အဖုတ်လေးကို မရှက်တမ်းကော့ထားမိတယ် မောင်ကတော့နေ့ကို သေချာခါးက ဖက်ပြီး လျှက်ပေးနေပါတော့တယ် မောင်က မျက်နှာနဲ့ အဖုတ်နဲ့ ခဏ ခွာလိုက်ပါတယ် နေလည်း မျက်နှာကျက်ကို မော့နေရာက အောက်ကို တစ်ချက် ငုံ့ကြည့်မိပါတယ် မောင်က ဒီတစ်ခါကြတော့ နေ့ အဖုတ်ထဲ လျှာ ထည့်ပြီး လိုးပါတော့တယ် နေ့အမြေးပါးလေးကိုတောင်တစ်ချက်ချက် လာထောက်ပါတယ် (နေကအပျိုစစ်စစ်ရှင့် အဲ့အချိန်ကပြောပါတယ်) “မောင် နေ့အမြေးပါးကိုမဖောက်ပါနဲ့နော် နေ့ အိမ်က သိရင် သတ်လိုက်မယ်” “မောင်နားလည်ပါတယ်နေရယ် ဒါပေမယ့် မောင့်လီးတော့ စုပ်ပေးနော်” “ဟုတ်ပါပြီမောင်ရယ်” ဆိုပြီး ကျွန်မလည်း ခုံပေါ်ကဆင်းပြီး ဒူးထောက်လိုက်တယ်။
မောင့်လီး နဲ့ကျွန်မမျက်နှာ တန်းတန်း လောက် အနေအထားပါ့ မောင်က သူ့ပုဆိုးကိုချွတ်ချလိုက်တယ် ကြမ်းပြင်မှာ ပုံသွားတာပေါ့ မောင့်အတွင်းခံလေးကိုဆွဲချွတ်ရင်း မောင့်လီးကို ကြည့်နေမိတယ် အရှည်ကြီးပဲရှင့် ၆လက်မ ရလက်မ လောက်ရှိမယ် ထောင်မတ်ပြီးထိပ်မှာအရည်တွေရွဲနေတယ် နေလည်း နေ့တံတွေးနဲ့ သူ့အရည်ရယ် ပေါင်းပြီး လီးတစ်ချောင်းလုံးပွတ်ပေးရင်း အရင် ဆုံး မောင့်ဟာလေးကို ဂွင်းတိုက်ပေးနေမိတယ် မောင်က တော့ တစ်အားကို ကျေနပ်နေတယ့်ပုံပါပဲ နေစစချင်းမောင့်ဒစ်ကိုငုံလိုက်တယ် ပြီးမှတစ်ဖြည်းဖြည်း အရင်းထိ စုပ်ချသွားတယ် နေလည်းပါးစပ်နဲ့အထက်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်နဲ့ အားရပါးရစုပ်ပေးပါတယ် မောင့်အချောင်းကလေ ပူပူနွေးနွေးလေးရှင့် (စုပ်လို့ကောင်းတယ် ပြောရင်လွန်မလား မသိဘူး) ” အ ….အ ….. နေ မောင် ထွက်တော့မယ်” နေလည်း မောင့် လီးကြီးပါးစပ်က ချွတ်ရင်း “မောင်ကလည်း နေ့မျက်နှာတွေ ပေအောင် အပြင် မှာ ထုတ်မလို့လား ” “နေ ရွံ မှာစိုးလို့ပါ မောင်က ပြဿနာမရှိဘူး” “မောင် ရေ အသင့်ပြင်ထားပေတော့” နေလည်း မောင့်လီးကြီးတစ်ချောင်းလုံးကို ငုံထား လိုက် ပြီး အားရပါးရ လျှာနဲ့ကစားပါတော့တယ် မောင့် ရဲ့ သုတ်တွေဟာလည်း အား ကောင်းကောင်းနဲ့အပြင်ထွက်လာလိုက်တာ နေ့အာ့ခေါင် တစ်ခု လုံး ပူနွေး သွားတာပါပဲရှင် နေလည်းလေ ငန်ကျိကျိ သုတ်ကလေးတွေကို မောင့်ချစ်တယ့်စိတ်ကြောင့်ပဲ မျိုချမိသွားပါတယ်။
နေလည်း ပါးစပ်ကိုအသာအယာ သုတ်ရင်း “မောင်နေမပြီးသေးဘူးနော်” “မောင်ကလည်းနေ့ကိုဒီအတိုင်ပစ်မထားပါဘူး နေရယ့် လာခုံနှစ်လုံးကပ်လိုက်ရအောင်” ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ပဲ စာရေးခုံနှစ်လုံးကပ် လိုက်တာပေါ့ နေတို့နှစ်ယောက်ယှဉ်အိပ်လို့ ရအောင်တော့ကျယ်တာပေါ့ “မောင် နေ့အမြေးပါးပေါက်ရင် နေ့အိမ်ကသတ်မှာနော်” “နေကလည်း မောင်နေ့ကို မလုပ်ပါဘူး နေပြီးသွားအောင် မောင် စောင်းတိုက်ပေးမလို့ နေ ခုံပေါ်အိပ်လိုက်လေ နေမောင့်ကို တော့ တစ်မျိုမထင်နဲ့နော် နေစောင်းတိုက်ဘူးလား” “အော် မောင်ကလည်း နေ ဒီအရွယ်ကြီးရောက်မှတော့ မလုပ်တတ်ဘဲနေပါ့မလား အဆောင်မှာ out pass ထွက်ရင်လည်း အင်တာနက်ဆိုင်ပြေး အဲ့ကားတွေကြည့်ပြီး တိုက်ရတာ က အမော တစ်ခါတစ်လေ ဆို အဆောင်မှာတောင်မဟုတ်ဘူး စိတ်တစ်အားပါလာလို့ အင်တာနက်ဆိုင်မှာတင် တိုက်ပြီးပြီးသွားတယ် ဒါကြောင့်မလို့လဲ မောင့်ကို ပြုစုနိုင်တာလေ မဟုတ်ရင်အဲ့လောက်ကြီးကျွမ်းပါ့မလားမောင်ရယ့်” နေလည်းပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ခုံပေါ်တက်အိပ်လိုက်ပါ တော့တယ်။
မောင်ကနေ့အဖုတ်လေးကိုလက်နဲ့အသာအယာပွတ်ပေးတယ် အထက်နဲ့အောက်မှန်မှန်လေးပေါ့ တစ်ချက်ချက်ကျ တော့ နေ့အဖုတ်ထဲလက်ကလေး နွုတ်ပြီးပွတ်ပေးတယ် နေ့အစိလေးကိုလည်း မောင်ကကစားပေးတယ်လေ လက်ကလေးနဲ့ ပေါ့ မောင် ရဲ့ လက်ကြောင့်ပဲ နေ ထူးကဲတယ့်အရသာတွေ ခံစားရတာ ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်မသိပါဘူးရှင် မောင်ရဲ့ လက်ရဲ့ ကစားတာကလေ မှန် မှန် လေးကနေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်လာပါတယ် ပြီးတော့လေ “မောင် နေ့ကို နောက်တစ်ခေါက် ထပ်လျက်ပေးမယ် နော် ” ဆိုပြီး မောင်ဟာ နေ့ ကို ဒူးထောင်ခိုင်းပြီး ပေါင်ကြားနှစ်ဖက်ကြားခေါင်းစိုက်ပြီး အားရပါးရရက်ပါတော့တယ် မောင်က နေ့ အဖုတ်လေးကို အထက် အောက် လျှာ အပြား လိုက် ရက်လိုက် အဖုတ် နံရံ လေးတွေကို လျှာ နဲ့ ထိုး လိုးလိုက် အစိ လေးကို လျှာ နဲ့ ထိ လိုက် နဲ့ ကစားပေး တယ်လေ နေလေ ခုံ ကို ကိုင် ထားပြီး တော့ မရှက် တမ်း အဖုတ် ကို ကော့ထား ပေးမိတယ် “အား အ အ လျက်ပါ မောင် ရယ့် အား ရပါးရ လျက် လိုက်ပါ မောင်ရယ့် အစိ လေးကို ပါထိ အောင် လျက်ပါ မောင်ရယ့် နေ လေ မအောင့်နိုင်တော့ ဘူး သိလား” နေလေ တစ် ကိုယ် လုံး ကို ထူးထူး ဆန်းဆန်း အရသာခံစားရပြီး ပါးစပ်က အော်ရင်းညည်းရင်း နဲ့ပဲ ပြီးသွားပါတယ် မောင်ကတော့ နေ့ အဖုတ်ရည်တွေကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အားရပါးရ သောက်သုံး လိုက်ပါတော့တယ် “မောင် နေ မောင့်ကို သိပ်ချစ်တာပဲ မောင်” နေလည်း ခုံ ပေါ်က ထ ကြမ်းပြင်ပေါ် ပုံ ကျ နေတယ့် ထဘီကို ပြန်ဝတ် ဖို့ အလုပ်မှာ “နေ နေ့ ပင်တီလေးကို မောင် အမှတ်တရ သိမ်းထားပါရစေနော်”။
“လို ချင် ရင် မောင့်ဘောင်းဘီပြန်ပေးခဲ့လေ” “ကတိနော် ကတိ” ပြောပြောဆိုဆို ပဲ မောင် ကနေ့ပင်တီလေးကို နမ်းရင်း တယုတယ သိမ်းသွားပါတယ် နေကတော့ လူ မြင်မှာ ကြောက်တာနဲ့ မောင့်အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ဝတ်လိုက်ပါတယ် မောင်နဲ့နေတို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပူးပူးကပ်ကပ်ဖက်ပြီး ပါးစပ်ခြင်းထိ ပြီး လျှာခြင်းကစားခဲ့ကြတယ် “နေ မောင့်ဆီ ဖုန်းဆက်အုန်းနော် တက္ကသိုလ်လည်းတူတူတက်ကြမယ်နော်” “ဟုတ်ပါပြီမောင်ရယ့် ပြန်ကြရအောင် အပြင်မှာ တစ်ဆောင်ခြင်းစီ ကျောင်းကားပေါ်တက်ပြီးထွက်နေပြီ” နေမောင့်နွုတ်ခမ်းလေးတွေကို စုပ်နမ်းပြီး နွုတ်ဆက်အနမ်းပေးခဲ့လိုက်တယ် နေကနေ့တောင်ပေါ်မြို့လေးကိုပြန် မောင်က အညာကိုပြန်တာပေါ့ . . . . . ဖုန်းမြည်လာ ၍ ကြည့်လိုက်မိသည် မမြင်ဖူးသောဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည် …… ပြီးပါပြီ။